Filtrer les éléments par date : samedi, 21 mars 2020
samedi, 21 mars 2020 21:25
Fisorohana ny fihanaky ny coronavirus: Hanakatona vonjimaika ny toeram-pitsangatsanganana ny ao Andraikiba
Nandray didim-pitondrana laharana faha-844/2020 ny teto anivon’ny Prefektioran’Antsirabe, androany sabotsy 21 marsa 2020, ho fampiharana ny fanambarana nataon’ny Filohan’ny Repoblika ny zoma 20 martsa 2020, sy ny torimarika avy amin’ny Minisitry ny Atitany mametraka ireo fepetra manokana hisorohana ny mety ho fihanaky ny COVID-19.
Araka izany dia nisy ny fandraisana fanampahan-kevitra mahakasika ny hanakatonana vonjimaika ny toeram-pitsangatsanganana ao Andraikiba.
Maro ireo mpitandro ny filaminana no ho hita sy hiasa amin’ny toerana maro arovana manokana eto Vakinankaratra.
samedi, 21 mars 2020 20:48
Coronavirus: Miato ny fotoam-pivavahana amin’ny Fiangonana Jesosy Mamonjy manerana an'i Madagasikara
Ho fampiharana ny fanambarana nataon'ny Fitondram-panjakana manoloana ny fihanaky ny valan'aretina Coronavirus (Covid19) dia miato ny fotoam-pivavahana eo amin'ny Fiangonana Jesosy Mamonjy eran'i Madagasikara manomboka izao mandra-pahatapitry ny fe-potoana 15 andro izay napetraky ny Fanjakana.
Manentana ny mpino ao aminy hivavaka ho an'ny Firenena any an-tokantrano, ny Mpitandrina ao amin'ny Fiangonana Jesosy Mamonjy, Foibe Ankorondrano-Antananarivo.
samedi, 21 mars 2020 20:32
Coronavirus: 800 no maty ao anatin'ny 24ora any Italia
Raha manomboka voafehy ny valan'aretina any Sina, dia Italia no misy maty be indrindra izao. 800 ireo namoy ny ainy tao anatin'ny 24ora monja. 4 825 ny fitambaran'ny maty nanomboka nidiran'ity aretina ity tany, ary 6 557 ireo olona misy soritr'aretina ankehitriny. Milan sy la Lombardie avaratra no tena voa mafy, ary tsy maharaka intsony ny toeram-pitsaboana any an-toerana.
Coronavirus: Numéro vert
En cas de suspicion ou signe ou symptôme de la maladie de Coronavirus, appeler directement le numéro vert gratuit 913.
Pour des questions ou plus de renseignement ou des informations appeler le 910.
Ne pas abuser de ces appels, probablement il y a plus urgent que vous, alors que vous occupez la ligne.
samedi, 21 mars 2020 19:09
Coronavirus: Laharana maitso
Raha misy tranga na fambara ny soritraretina coronavirus dia antsoy avy hatrany ny laharana maitso tsy andoavam-bola 913.
Raha misy fanontaniana na fangatahana fanazavana dia antsoy ny laharana 910.
Raha mety fanazavana ho hitanao amin'ny tambazotra-tserasera hafa dia aza bahanana ny antso fa mety misy olona tena maika mila miantso.
samedi, 21 mars 2020 19:06
Faritra Menabe: Hametraka «barrage sanitaire » ao Miandrivazo tsy hiparitahan’ny coronavirus
Nandray fepetra ireo tomponandraikitra samihafa ho fiarovana ny fahasalamam-bahoaka ato amin’ny Faritra Menabe, taorian’ny fivoriana niarahan’izy ireo androany.
Anisan’ny fanapahan-kevitra noraisina ny hametrahana « barrage sanitaire » ao Miandrivazo, amin’ny lalam-pirenena faha-34, mba hitsirihana ny marimpanan’ireo mpandeha tonga ao amin’ny Faritra Menabe, na amin’ny fiara fitateram-bahoaka na amin’ny fiara manokana izany, ary hisy ny fepetra ho raisina amin’ireo izay ahiana mitondra izany aretina izany.
samedi, 21 mars 2020 18:57
Tsenan’Anosibe: Niakatra avo roa ka hatramin’ny dimy heny ny vidin-javatra
Nahitana fisondrotana haingana ny vidin’ny sakamalaho, tongolo ary voasary makirana teny an-tsena, saika manerana ny Nosy taorian’ny fanambarana ofisialy nataon’ny fanjakana, omaly hariva, fa efa eto Madagasikara ny valanaretina coronavirus ary misy olona telo efa voamarina fa voan’io aretina io.
Raha ny hita teo amin’ny Tsenan’Anosibe Antananarivo dia lasa 10 000 Ariary ny kilao amin’ny voasary makirana raha 2 000 Ariary izany omaly. Toy izany koa ny tongolobe, lasa 10 000 Ariary ny kilao androany raha 2 000 Ariary teo aloha. Niakatra ho 12 000 Ariary ny sakamalaho iray kilao androany raha 4 000 Ariary izany omaly. 18 000 Ariary ny tongolo gasy iray kilao raha toa ka 9 000 Ariary izany teo aloha.
samedi, 21 mars 2020 18:55
FFKM: « Tsy mankany ampiangonana aloha isika fa misoroka ny valanaretina coronavirus »
Nihaona tamin’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina tao amin’ny lapam-panjakana Ambohitsorohitra androany sabotsy 21 marsa 2020, ireo filoham-piangonana ao amin’ny FFKM. Nisy fanambarana niarahana taorian’ny fihaonana. Nitondra teny ny Pastora Dr Rakotonirina David, filohan’ny FLM sady filoha amperinasa ny FFKM.
Efa iaraha-mahalala fa tafiditra eto Madagasikara ny valanaretina coronavirus, hoy izy, ka « ny ezaka rehetra tsy maintsy atao izao, ifandrimbonan’ny olona tomponandraikitra rehetra na ara-panjakana na ara-piangonana na ny fiarahamonim-pirnena dia ny misoroka, tsy hahafahan’io valanaretina io mitombo eto amin’ny tanintsika. Tsy iadiankevitra intsony ny fisian’ny coronavirus eto fa ny atao dia ny hifehezana azy tanteraka mba tsy hitombo ».
samedi, 21 mars 2020 14:44
Antsirabe: Filaharana no hita eny amin’ny farmasia sy toby mpaninjara solika
Noho ny tahotra ny fihanaky ny valanaretina coronavirus dia nahitana filaharana teny amin’ireo farmasia sy toby mpaninjara solika teto an-drenivohitry ny Faritra Vakinankaratra hatry ny omaly hariva sy androany tapakandro maraina.
Raha ny hita amin’ny ankapobeny eny amin'ny farmasia anefa dia « cache-bouche » singany iray na roa no handanian'ny olona andro milahatra. Ny « cache-bouche » anefa tsy azo anaovana mihoatra ny ora 6 dia tsy maintsy soloina, nefa ny fotoana lany hilaharana azy efa tapitra ny fetr'ora ampiasana azy.
Nahitana filaharana ihany koa teny amin'ireny toeram-pivarotana goavana ireny hatramin'ny maraina, olona miantsena ireo entana ilaina andavanandro atao tahiry.
samedi, 21 mars 2020 14:30
Coronavirus: Mitebiteby ireo mpiasan'ny Zone, Sheritt, QMM
Mpiasa aman-jatony no miaraka vory miasa amin'ny toerana iray raha ireo mpiasan'ny zone franche sy ireo indostria vaventy, na eo amin'ny toeram-piasana izany, na eny amin'ny camp de base na toerana iombonana honenana, na any anaty fiara fitaterana.
Matahotra ireo mpiasa ka manontany ireo fepetra manokana ho an'ny mpiasa na ny mety fiarovana ho azy ireo, na ho an'ny fianakavian'izy ireo izay vantaniny ao an-trano.